I-RockPlayer2 iza ne-interface enhle yomsebenzisi kanye nenketho yokwabelana nge-WiFi multimedia nokubuka amavidiyo abukhoma online | Izindaba zamagajethi
I-RockPlayer2 iza ne-interface enhle yomsebenzisi kanye nenketho yokwabelana nge-WiFi multimedia nokubuka amavidiyo abukhoma online
Sekuyisikhathi impela kusukela lapho I-RockPlayer2 yenziwa yatholakala kubasebenzisi be-iOS, futhi manje yisikhathi sokuba abalandeli be-Android bajabulele inguqulo entsha yesinye sezinhlelo zokudlala zemidiya ezisetshenziswa kakhulu ezinesici esivelele kakhulu nezinhlelo zokusebenza zokusakaza zama-smartphone namathebulethi. I-RockPlayer2 isanda kushaya isitolo sokudlala ngesixhumi esibonakalayo somsebenzisi esakhiwe kabusha ngokuphelele kanye nezinto eziningi ezinamandla, kufaka phakathi ukusekelwa kwefomethi yemidiya yonke, ukwabiwa kwemidiya engenantambo kuwo wonke amadivayisi ngeRockShare, ibha yokusesha ecatshangelwe (eyaziwa nangokuthi iFreeSeek), iklayenti lomdabu le-UPnP, imidiya ethuthukisiwe ukuphathwa kwefayela, ukuxhaswa kwemibhalo engezansi, ikhophi ye-HDMI, ibha yokulawula eyenziwe ngezifiso ngokuphelele, nezenzo ezahlukahlukene zokulawula ukudlala kwe-multimedia kudivayisi ngomzamo omncane. Sekukonke, lokhu kungukuvuselelwa okukhulu kubhekela izinguquko ezibalulekile ngokuya ngokusebenzisana okuthuthukisiwe kanye nezici ezintsha.
Manje ungathola isikhombimsebenzisi esibushelelezi ngokusekelwa kokuthinta ohlangothini ukukusiza ukuthi uzulazule ngokushesha uye emisebenzini ehlukahlukene yohlelo lokusebenza. Ekhuluma ngezici, lawa amaphakethe weRockPlayer2:
TV : Ikuvumela ukuthi udlale okuqukethwe okuvela emithonjeni yokusakaza online. Izivumelwano ezisekelwayo zifaka phakathi i-HTTP, i-SSH, ne-RTSP, njll.
Foro - Ikuvumela ukuthi uhlanganyele nomphakathi oku-inthanethi wemibono ye-RockPlayer, izibuyekezo, imibuzo nezimpendulo, izinkinga nezisombululo zazo. njalo njalo
Umtapo wezindaba : Uhlelo lokusebenza oluphambili lwesiphequluli semidiya kanye nesibonisi sokuphathwa kohlu lwadlalwayo lwehlukaniswe izigaba ezintathu - Ividiyo, Umculo ne-TV - ngayinye inokwesekwa ngezithonjana.
Imenenja yefayela : yakha isiphequluli sefayela ukukusiza ukungenisa kalula amafayela wakho wemidiya kusuka ezindaweni ezithile ekhadini le-SD.
lwadlalwayo : Qala lonke uhlu lwakho lwadlalwayo lwe-RockPlayer oluzigodlile.
Red : Ibala wonke amadivayisi we-UPnP atholakalayo kunethiwekhi yakho yasekhaya ukuvumela ukudluliswa kokuqukethwe okukude kuwo wonke amadivayisi.
Ukwabelana ngamafayela ukude nabanye abasebenzisi beRockPlayer2 abaseduze, kuzodingeka uqale ucindezele inkinobho yepensela ngakwesokunxele phezulu ukufaka imodi yokukhetha. Bese ukhetha amafayela owadingayo, thepha kuthebhu ye-Wi-Fi, ukhethe umamukeli (aba) bese ulungele ukuhamba. Esikrinini sokukhetha uqobo, ungakha futhi uhlu lwadlalwayo olusha, uvuselele okuqukethwe kohlelo lokusebenza, ususe amafayela akhethiwe, futhi ufihle okuqukethwe komuntu siqu emehlweni abukhali. Lapho usukhethe amafayela adingekayo, unganyakazisa idivayisi yakho ukuwafihla ohlwini.
Ngenkathi ubuka amavidiyo noma ulalele umculo, ukuthinta okulandelayo kuyatholakala kuwe ukulawula ukudlala nezinye izilungiselelo:
Ngeminwe emibili, thepha ukuze udlale, ume isikhashana noma uqale kabusha ukudlala.
Swayiphela ngakwesokunxele noma kwesokudla ukuze uye emuva noma phambili, ngokulandelana.
Swayiphela phezulu ukuze ubonise noma ufihle izilawuli zemidiya.
Thinta onqenqemeni lwesobunxele kwesikrini ukuze ubonise isilayidi sezinga lokukhanya.
Thinta onqenqemeni lwesokudla kwesikrini ukubonisa isilayida sevolumu.
Ukwenza ngokwezifiso ibha yokulawula, cindezela bese ubamba noma iyiphi inkinobho kubha yokulawula. Unezinkinobho zebha ezihlukene ezifika kwezinhlanu ongadlala ngazo, futhi ngayinye inganikezwa isilawuli esihlukile kusuka kuzinketho ezahlukahlukene ezitholakalayo njengokukhipha, emuva, phambili, dlala / misa isikhashana, umhlahlandlela, ukukhanya, imibhalo engezansi, ukukhethwa kwethrekhi yomsindo, ilokhi yokulawula , usayizi wewindi, imodi yomdlalo, thatha isithombe, isenzo, ukukhetha kwe-HW / SW codec, nesikhathi samanje.
Ngokuvamile, uhlelo lokusebenza lusithande ngohlu lwalo olude lwezici, noma ngabe sibona indawo ethile yokwenza ngcono njengokusekelwa kokudlala ngemuva kwamafayela alalelwayo, nokudlalwa okungcono kwamavidiyo we-1080p, yize okuncane akuyona into enkulu kwabaningi abasebenzisi okwamanje. Ngaphandle kwalezi zingqinamba ezincane, iRockPlayer2 ingesinye sezidlali zemidiya ezihamba phambili ezikhona namuhla, futhi iyakwazi ukuphekela abezindaba ngokudlala, ukusakaza kanye nokwabelana ngezidingo kahle impela.
Landa i-RockPlayer2 ye-Android
Landa i-RockPlayer2 ye-iOS
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-RockPlayer2 iza ne-interface enhle yomsebenzisi kanye nenketho yokwabelana nge-WiFi multimedia nokubuka amavidiyo abukhoma online
I-Foursquare yenza ushintsho kunqubomgomo yayo yobumfihlo
Izinqamuleli zeFirefox zokuphequlula ngokushesha